lettwebaw – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
A prolific Burmese writer whose main work is non-fiction with many articles and books on psycho-social and health issues including sex education for teenagers, proper etiquette, child rearing practices and marriage counselling tips. Another nom de plume is "Pseudonym."
အင်ထနက်မှာ စာရေးရင် အခိုးခံရလွန်းလို့ စိတ်ညစ်လာပြီး အခု Video Log (vlog) ကို စတင် စမ်းသပ်နေပါတယ်။
https://www.facebook.com/writer.atta.kyaw မှာ ဝင်ကြည့်ရင် လတ်တလောမှာ အိမ်ထောင်ရေးပြင်ပ ငြိစွန်းမှု ခြောက်မျိုးကို တမျိုးစီ ပြောထားတာတွေ တွေ့ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၁ – https://www.facebook.com/writer.atta.kyaw/videos/10219376582858314/
၂ – https://www.facebook.com/writer.atta.kyaw/videos/10219383359067715/
၃ – http://www.facebook.com/writer.atta.kyaw/videos/10219390037714677/
၄ – https://www.facebook.com/writer.atta.kyaw/videos/10219398776333137/
နောက်ပိုင်းလည်း ဆက်လက် ဆွေးနွေးသွားမှာမို့ ဝါသနာ ပါရင် အဲဒီ့ကို သွားရောက် ကြည့်ရှု နားဆင် ဝေဖန် အကြံပြုနိုင်တော်မူကြပါကြောင်း
Author lettwebawPosted on 21 February 2020 Categories UncategorizedLeaveacomment on စာမရေးတော့ဘဲ ပါးစပ်နဲ့ ပြောနေပါတယ်